Waxa Lagu Filayo Xeerka Xeerka ee Gobolka Oklahoma
Mareykanka Oklahoma Oklahoma City
Sidaas darteed waxaad ku heshay wargelinta waraaqaha boostada. Waxaa laguu doortay waajibaad xeerbeegti. Hal milyan oo fikrado ah ayaa madaxaaga u gudbiya, iyadoo laga yaabo inay ka careysiiso waxoogaa xiiso leh. Wax ka badan wax walba, kaliya ma hayo fikrad sida ay u shaqeeyaan. Hagaag, si aad u nadiifiso jahawareerka oo kuu diyaariso waayo-aragnimada, halkan waa liisto su'aalo badanaa la isweydiiyo oo ku saabsan waajibaadka xeerbeegtida ee gobolka Oklahoma.
Halkee ayaan tagaa?
Ogeysiiskaagu wuxuu kuu sheegayaa goobta jimicsiga ah, ee Maxkamadda Degmada Oklahoma ee magaalada Oklahoma City. Waxay ku taallaa 320 Robert S. Kerr Avenue inta u dhaxaysa Hudson iyo Harvey, oo ah bariga bari ee OKC Museum of Art .
Marka aad gudaha ku jirtid, waxaad ku sii wadi doontaa barta kontaroolada amniga, markaa waa inaad ka fikirto waxa aad haysato jeebkaaga. Qaado wiishka dabaqa 5aad, kana dhig qolka jury ee qolka 513 si aad u hubiso.
Xaggee baan dhiganayaa?
Waxaa jira dhawr fursadood oo loogu talagalay baabuurta la dhigto ee magaalada Oklahoma City . Mitirku ma shaqeynayo sababtoo ah shuruudaha ku lug leh markaa raadso garaash ama garab dusha sare ah. Qofka tooska ah ee ka socda maxkamadda ayaa si sahlan u roon, laakiin haddii aad dhigato meelo dhowr ah oo ka baxsan oo lugeynaya, waxaad ku badbaadin kartaa lacag.
Maxaan ku xirtaa?
Xafiiska Karaaniga ee Degmada Oklahoma wuxuu ku siinayaa waxoogaa caddayn ah boggiisa internetka, isaga oo sheegaya in "gaaban, taangiyada taangiyada ama kabaha cirifka looma ogola." Sidoo kale, waxaa suurtogal ah in laga hortago koofiyadaha.
Sida iska cad, dhar wanaagsan. Xusuusnow inaad joogi karto waqti dheer, inkastoo, sidaas darteed hubi in aad raaxaysato. Tusaale ahaan, ma aha inay gashadaan xidhiidh. Ujeeddadu waa mid wanaagsan, laakiin waxaa laga yaabaa in laga yaabo inay ka baxaan iyagoo xiran qaar ka mid ah joornaalada fiican.
Miyaan u baahanahay inaan keeno wax kasta?
Waajibaadyadaada ayaa kuu sheegi doona wakhtiga imaatinkaaga, laga yaabo kahor 8 subaxnimo Soo-qabsashadaada, iyo sidoo kale aqoonsiga .
Sidoo kale, waxaa jira fursad fiican oo aad sugi doonto. Wax badan. Sidaas soo qaado buug ama joornaal si aad u akhrido.
Intee in le'eg ayaan joogi doonaa?
Wixii ku saabsan habka xulashada, waxaad eegaysaa 2-3 maalmood oo ah 8 subaxnimo illaa 5 galabnimo. Haddii laguu doorto kiis, inkastoo, waxay noqon doontaa waqti dheer, inta lagu jiro dhowr toddobaad oo loogu talagalay maxkamadaynta dambiyada.
Sidee baa loo doortaa?
Waa farsamooyinka hore ee -ka-ku-jir ah. Haa, inkastoo tiknoolajiyada si ballaaran u ballaarisay nolosheena, maxkamadda ayaa wali ku socota iskuday iyo run. Maadaama ay jureecadu u baahan yihiin qolka maxkamad, bailiff ayaa soo bixi doona oo ku dhawaaqaya lambar ku saleysan haddii kiisku yahay mid madani ah ama dambi ah. Magacyada waxaa lagu sawiraa oo kor u akhriyaa. Ka dibna waxaa jira nidaam isku mid ah mar gudaha qolka dhegaysiga. Qaarkood waa la eryey ka dib markii su'aalo la waydiiyay, dhibcoodana waxaa qaata musharaxyo kale illaa inta laga dooranayo jury-ka ugu dambeeya.
Maxaa Looga Heli Karaa?
Waxaad heleysaa sharaf ku soo noqoshada qolka jury-ka si aad u sii sugto. Haddii aanad dooran muddada 2-3 maalmood, caadi ahaan waxaad heli doontaa sii-deyn waana la dhammeeyaa.
Raadi Gargaarka Garage ee Oklahoma City
Maalinta Dayuuradaha iyo Hawlgabka Toddobaadka laga bilaabo Oklahoma City
Ku Dhex Gali Tiyaatarka Filinka ee Oklahoma City
Dhacdooyinka Maalmaha Shaqada ee Oklahoma City
Oklahoma City Pools iyo Xarumaha Biyaha
Septemberfest 2017 ee Oklahoma City
11 Siyaabaha Habboon Si Labbis Loogu Fogaado RV
Yves Saint Laurent Studio ee Paris
Xaafadaha sare iyo kuwa soo-gala ee Los Angeles
Queensland's Beach Best: Port Douglas ama Whitsundays?
Elena Gallegos Fure Open
15 Meelaha ugu Fiican ee Qoysaska ee Koonfurta Ameerika
Dhaqdhaqaaqyada Dhacdooyinka ugu fiican ee Colorado, Classic iyo New
TSA waxay u ogolaataa Hubinta La-Socodka Lacagta Laptop-ka ah iyo Gundhaca
Waxyaabaha Lagu Qabto Magaalada Crescent City, California
Waxyaabaha Lagu Ogyahay Marka La Booqanayo Bulshada Is-Gaarka ah
Octane Raceway - Racing Inward / Out Riding ee Scottsdale
History of Blizzards iyo Dabaylaha Barafka ee Detroit